Modern emoyeni isimo ngoba nelineni imisebenzi okungenani ezimbili: ukuthambisa Indwangu futhi enongiwe. Okuningi izindlela ezithuthukile kungavimbela futhi ukubukeka zikagesi futhi ukukhula kwamagciwane, ngisho lula ayina dudula kwamanzi nokungcola! Kunengqondo ikhambi isimangaliso. Kodwa okokuqala kudingeka uthole ukuthi kungani zangaphansi nge isikhathi kuba nzima.
Modern ilondolo izihlanzi zimumethe a phosphate calcium, okuyinto luhlala e kwezintambo zesivikelo sesifuba Indwangu. Yiqiniso, kungaba ukuqeda, kahle uhlambulule izingubo, kodwa hhayi wonke emizi ukukwenza. Nge egeza omusha ngamunye kwezicubu uhlala ngaphezulu yalolu ketshezi, abanye usawoti imali njengoba kusukela amanzi kanzima. Ngenxa yalokho, izingubo babe ongathandeki touch, futhi okugeza amathawula ulahlekelwe izakhiwo zabo hygroscopic. sezingubo esikahle phezu Indwangu kudala ifilimu obusiza beya futhi kwakha umuzwa umsungulo. Nokho, le ndlela akusho ukuxazulula inkinga ngokwayo.
Ekugcineni usawoti uzoqhubeka buthelela izicubu futhi phezu kwabo isazoqhubeka zingagcinwa ungqimba abicah, okuvela kulo ikakhulukazi aqukethe conditioning ilondolo. Nezingubo bayoguga ngokushesha. Uma lokhu akuyona inkinga, ungaqhubeka ukusebenzisa mouthwash. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi, namanje ngeke kuphumelele. Nweba ukuphila izingubo kungaba, okungenani ngokusebenzisa isikhathi by uhlambulule ke ngendlela ofuna - tandla emahlandla la -10. Yiqiniso, kulesi simo ungasebenzisa umshini wokuwasha, kodwa izindwangu obucayi kakhulu zingcono ukusingatha ngesandla.
Ukuba izinsana a air conditioning ekhethekile iyatholakala izingubo zezingane, kodwa zonke efanayo ekuqaleni, zonke izinto okudingeka bamba ithambo ngokucophelela kusukela zombili - ngeke ukuthambisa izicubu. Kuleso simo, uma namanje ukuthola ukushukuma, kungcono ukuyeka ukusetshenziswa kwanoma yisiphi amakhemikhali ahlanze izingubo zezingane kwezomnotho noma insipho zezingane. Omama abaningi abasha futhi usebenzise ugxilisa ekhethekile ketshezi. Futhi-ke, rinses ekhethekile avame ukusetshenziswa ngabantu abanemizimba isikhumba ukusabela amakhemikhali, njengoba isimo emoyeni zezingane ezibhekwa hypoallergenic.
Indlela ukukhetha okungcono Indwangu sezingubo futhi kanjani ukuyisebenzisa? Eqinisweni, umnikazi ngamunye kuyodingeka ufune efanelekayo hashaza ngokwakho, ngoba kwezinye kusho ukuthi ungaba yokungezwani komzimba, lo omunye akumelwe iphunga elimnandi, yesithathu kubonakale nokumosha. Cishe zonke Indwangu sezingubo kanye conditioner amayelana okufanayo ukubunjwa: surfactants cationic, silicones namakha. Ngakho ukuthi isiqalo kwakuyodingeka kuphela akuthandayo zabo siqu.
Kubalulekile futhi ukusebenzisa sezingubo esikahle futhi conditioner. Kunoma ikuphi akunakwenzeka ukugcwalisa kubo egumbini yokuwasha, kanye nesidingo banamathele ngokuqinile umthamo. Sebenzisa isilinganiso esikahle hashaza usizo kubaluleke kakhulu, ngoba abicah kwefilimu indwangu akufanele kube too mncane noma obukhulu kakhulu, ngaphandle kwalokho umphumela akunakwenzeka ukuba yiyo. ukuwasha Proper futhi uhlambulule - isiqinisekiso sokuthi izingubo oyohlala isikhathi eside futhi ngeke ulahlekelwe impahla yayo.
Crescent (Iwadi): ukubaluleka izakhiwo esiyingqayizivele